Philadelphia စမ်းသပ်ချက် (အပိုင်း -၁) – ဘာသာပြန်သူ- ခင်မမမျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » Philadelphia စမ်းသပ်ချက် (အပိုင်း -၁) – ဘာသာပြန်သူ- ခင်မမမျိုး
Posted by kai on Jan 9, 2012 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette, Short Story | 15 comments
စကြ၀ဠာကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြေရှာဖို့ ခက်ခဲလှတဲ့ ပဟေဠိပုစ္ဆာတွေတိုင်းဟာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ စကြ၀ဠာကြီး ဘယ်လိုစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သလဲ။ ဘယ်လို မွေးဖွားလာခဲ့သလဲ။ အဲဒီလို မမွေးဖွားမီက ဘာတွေရှိခဲ့သလဲ။ ဒီပုစ္ဆာတွေရဲ့ အဖြေကို ဘယ်သူမှ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ပဟေဠိတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပဟေဠိတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသားတွေဆီမှာ အတွေးအခေါ်တွေ များစွာ ပေါ်ပေါက် လာကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီလိုအတွေးအခေါ်တွေကို သက်သေပြနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ တခါတရံကျတော့လဲ ပဟေဠိတချို့ကို အဖြေရှာလို့ ရသွားတတ်ပါတယ်။
” ဘာလိုချင်လို့လဲ ”
“ Miss Henried လား ”
” ရှင်ဘယ်သူလဲ ”
” အသေးစိတ်ဖတ်ရအောင် သိပ်ပြီး အလင်းရောင်မရှိဘူး။ အက်ဖ်ဘီအိုင် (FBI) ကလား ” လို့ ကျွန်မ မေးလိုက်ပါတယ်။
” ဒီအိုင်အေ (DIA) “ လို့ သူမက လှမ်းဖြေပြီး၊ သူမရဲ့ ကတ်ကိုလဲ မြှောက်ပြီး ကိုင်ပြပါတယ်။
” စီအိုင်အေ (CIA)- Central Intelligence Agency ကို ပြောတာလား”
” မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအိုင်အေ- Defence Intelligence Agency ကပါ”
” တို့တွေက ဒီအိုင်အေမှာရှိတဲ့ ရေတပ်ထောက်လှမ်းရေးဌာနကပဲ ” လို့ ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
” တို့တွေ အိမ်ထဲကို ၀င်လို့ ရမလား”
သူတို့အထဲရောက်လာချိန်မှာ ” ကျွန်မအ၀တ်လဲလို့ ရမလား ” လို့ မေးလိုက်တော့ အေးဂျင့်နှစ်ယောက်က တယောက်နဲ့တယောက် လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
” တို့လဲ လိုက်ခဲ့မယ် ”
” ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ထွက်ပြေးဖို့ ကျွန်မ မကြိုးစားပါဘူး ”
” တို့က မင်းကို မေးခွန်းအနည်းငယ် မေးရုံလောက်ပါ။ သေဒဏ်ပေး သေနတ်ပစ်အဖွဲ့ရှေ့ကို ပို့ဖို့ မစီစဉ်ထားပါဘူး ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
” ဒါဆို ကျွန်မအ၀တ်ဝတ်တာကို ဘာကြောင့် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုသလဲ ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
” ဒါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ”
” ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ မင်းတယောက်ထဲ အခန်းထဲ ရှိတဲ့အခါ သက်သေခံအထောက်အထားတွေကို ဖွက်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်လိုက်နိုင်တယ်လေ”
” ကျွန်မဘယ်ကို သွားတယ်ဆိုတာ အဖိုးကို အသိသွားပေးဖို့ လိုတယ်”
” လူကြီးလူကောင်း အဖိုးအိုတယောက်ကို စိတ်ပူအောင် သွားလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တို့မထင်ဘူး။ တို့မေးတာတွေအားလုံးကို မင်းကောင်းကောင်းဖြေမယ်ဆိုရင် သူအိပ်ယာက မနိုးခင် မင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာမှာပါ”
” သူကျွန်မအကြောင်းကို ဘာမှ မသိပါဘူး။ သူ့ကို ကျွန်မကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေချင်လို့ပါ”
” ဥပဒေကို မချိုးဖောက်ခင်ကတည်းက သူ့ကို ဘယ်လောက်စိတ်ပူပန်မှု ဖြစ်စေမယ် ဆိုတာကို မင်းစဉ်းစားခဲ့ဖို့ ကောင်းတယ်”
” ရာဘာနံပါတ်တုတ်တွေကို မျှော်လင့်နေသလား”
” မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မမှ ဘာအမှားမှ မလုပ်ထားတာ”
” စကြရအောင်” လို့ ပြောပါတယ်။
” မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ”
” တို့တတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းရဲ့ ကနဦးအစမှာပဲ ရှိသေးတာ။ ဒါက တရားဝင် အင်တာဗျူးမဟုတ်ပါဘူး။ စကားစမြည်ပြောရုံပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုတော့ အတူတူပဲ လုပ်ရတယ်။ မင်းက တို့အင်တာဗျူးလုပ်ရမယ့်လူဆိုတာ သေချာဖို့လိုတယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ ”
” ရှင်တို့ရဲ့ နာမည်တွေကိုမှ ကျွန်မ မသိရသေးတာ”
” တို့က Agent Miller ပါ။ သူကတော့ Agent Kirwan”
“မင်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပါလား၊ Alice”
အခုတော့ ကျွန်မဟာ အလေးထားစိတ်ဝင်စားခံရသူ ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ အကြောင်းတွေကို ထိုင်ပြောဖို့ မေးမြန်းခံနေရပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့ပါးသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မ နည်းနည်းပဲ ပြောပါမယ်။ အနည်းငယ်ပဲ ပြောပါမယ်။ ဒီလို တွေးလိုက်ပြီး ကျွန်မ စကားစပြောပါလိုက်ပါတယ်။
” ကျွန်မဟာ သင်္ချာပညာရှင် တယောက်ပါ”
ဖြစ်ရပ်မှန် လား ဗျ
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့ 
အေလိုက်စ် ဟန်းရိတ် ကို အမြင်ကပ်လာသလိုဘဲ ဗျာ ။
အဲအမျိုးသမီးနာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ ခင်ည
မောင်ပေက အေလိုက်စ်.ဟန်းရိတ် လုပ်နေတယ်..
သများလဲ နာမည်မခေါ်တတ်လို့ ..ဓာတ်ရိုက်စက်ကို ထွက်ခိုင်းတာ
အဲလိစ် ဟင်ရီးဒ် လို့ ပြောတယ်ဂျ
ဥပမာ-mg pay,mg pauk
၁) စာကောင်းပေမွန် အတွက် လည်း ကျေးကျေး..
၂) အဆိုပါစာကောင်းပေမွန်မှ ရသော ခံစားမှု အတွေး …သုတ ရသ အတွက်လည်း ..ကျေးကျေး…
သဂျီး အုန်းကျုန်းမ်း … ဖတ်ဖူးချင်တယ်ခည ….
သဂျီးလက်နဲ့ ဆို အချစ်ဝတ္ထု ၁ပုဒ် ဟာ ….
သဂျီး နုစဉ် လှစဉ်…. ရွစဉ် ကြွစဉ်က ..ငယ်ဘွ ဇာတ်လမ်းလေး
…..ဘာသာပြန်သူ- ခင်မမမျိုး (၂၈၊ ၁၂၊ ၂၀၁၁)….
ဒါကို ဖတ်မိတော့ ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကားကို သွားသတိရတယ်…
၀တ္ထုအဖြစ်နဲ့ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် သူကြီးရေ။
၀တ္ထုအပြီးမှာ သူကြီးထင်မြင်ချက်လေးလဲ သိချင်ပါကြောင်းခင်ဗျား…။
တကယ်က.. ဒီအိုင်အေအောက်မှာ.. ရေတပ်ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူးထင်တယ်..
Navy Intelligence ဆိုပြီး သီးသန့်ရှိပါတယ်..။
ဒါတောင် ဘတ်စကားပေါ်က ထောက်လှမ်းရေးတွေမပါသေးဘူး..။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးသန့်ဖယ်ထားတာ
ဘက်စကားပေါ်မှာ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်တတ်တာ ကတော့
ကျုပ် အသိ ငမျောက်ကျော် ဘဲ
သူ က ဘက်စကား စီးရင် အကြွေစေ့ လေး တစ်စေ့ အမြဲယူသွားပြီး ဟို ပစ်ချ ၊ ဒီ ပစ်ချ ၊ ပြီးရင်း ကုန်းကောက် နဲ့ သိပ် လက်ဆော့တာ ။
ဒါ့ကြောင့် သင်္ချာအောင်ခြင်တဲ့ကျောင်းသားတွေ သူ့ကို
ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဒယ်ဒီက သင်္ဘာဗိုလ်ကြီးလေ ( ဘကြီး FR လိုပေါ့ )
ဒါနဲ့ အဲ့သည်ကျောင်းသားလေးလည်း သူ့ဒက်ဒီသင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့
အသီးကြီးနှစ်လုံးကို ( သင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့အသီးပေါ့ ) ဖြုတ်ပြီး
ဆြာမ ဒါ သားဒက်ဒီ သင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့ အသီးဖြစ်ပါတယ် ဆြာမ ကြိုက်သလို
ဒါနဲ့ ဆြာမလည်း သူ့တပည့်ကျောင်းသားလေးရဲ့ ဒက်ဒီ သင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့ အသီးကြီးနှစ်လုံးကို
ဤမျှ ထွားကြိုင်းသန်မာလှသော သင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့ အသီးကြီးနှစ်လုံးကို ရေ၇ှည်စားသုံးနိုင်ရန်
ရေတာရှည် ဒါမှမဟုတ် ရေစကြို မှာရှိတဲ့
ဘိုးဘိုးကြီးနတ်စင်အောက်မှာ အစီမံနှင့် မြုပ်ထားမှလို့ ကြံစည်မိပေမယ့်
နောက်ဆုံး ရေဝေး ဘိုးဘိုးကြီးနတ်စင်အောက်မှာ မြုတ်ထားလိုက်လေတယ်
ဒီလိုနဲ့ ဟိုဖက် သင်္ဘောဗိုလ်ကြီးရဲ့ ဝဖီးဖီး အသီးကြီးနှစ်လုံးအကြောင်းပြန်ဆက်ရရင်
( မှတ်ချက်။ ။ ဤတွင် ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သူမှာ ကျောင်းသားလေး၏ မိခင်ဖြစ်သည် )
အိမ်တွင်းရှိ တရုတ်စီစီကင်မရာများ၏ မှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးလေရာ ဝါးတားတားဖြစ်နေပြီး
ပျောက်ဆုံးသွားသော အသီးကြီးနှစ်လုံးကို ပြန်တောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားကို ကြည့်နေရသလိုဘဲ။
ကြည့်နေရင်း မီးပျက်သွားခံစား လိုက်ရ သလို မို့ “ဟာ… ” လို့ အော်မိသေး။
ဆရာမ ခင်မမမျိုး က စာရေးအတော်ကောင်းတာနော်။ အားကျမိပါတယ်။
“ရောင်စုံဘော်လုံး လေးများ” ထဲက စကားတွေကိုလဲ မှတ်မိနေဆဲ။
ဆက်ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါ၏ သူကြီးရေ။
ဒီလို မျှပေးတာ သင်းခရု ပါ။ :-)
သူကြီးရေး ဖတ်လို့ တအားကောင်းတယ် ဗျို့ .. မြန်မြန်လေး လုပ်ပါအုံး